NNPC-Chevron Deeqda-waxbarasho ee Jaamacadeed ee Nigeria | Sida loo dalbado loona guuleysto 2022
NNPC-Chevron Deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah oo loogu talagalay Nigeria | Sida loo codsado oo loo guuleysto
Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato NNPC-Chevron deeq waxbarasho, sida loo dalbado loona guuleysto, shuruudaha u-qalmitaanka, qadarka ku lug leh, waqtiga codsiyada iyo waxyaabo kale oo badan.
Shirkadda Chevron Nigeria Limited, oo kaashanaysa iskaashi wadaag wadaag ah, Shirkadda Qaranka ee Shidaalka ee Nigerian (NNPC) ayaa sannad kasta siisa deeqo waxbarasho oo ay ku abaal mariso ardayda heerka koowaad ee jaamacadeed si heer sare ah oo aan mudnayn si ay ugu suurtagasho waxbarashada jaamacadeed.
Codsigan badanaa kiisaska loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee sannadka labaad ee ah ardayda runta ah ee hay'adaha dowladeed ee la aqoonsan yahay ee waddanka oo dhan.
Chevron waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara saliidda adduunka. Sannad kasta, waxay bixiyaan deeqo waxbarasho arday badan oo wax ka barata jaamacadaha iyo heerarka kale ee waxbarasho ee adduunka.
Deeqdani waxay u furan tahay ardayda aasaasiga ah ee injineernimada, caafimaadka, sharciga iyo koorsooyinka maamulka laakiin taasi maaha in la yiraahdo ardayda wax ka barata koorsooyin kale oo kala duwan oo ka mid ah xarumahooda ma heli karaan deeqdan waxbarasho sidoo kale, ka dib, ma ogaan doontid haddii aad Waan guuleysan doonaa inaad isku daydo mooyee.
1 Immisa ayey mudan tahay deeqda waxbarasho ee Chevron?
1.1 Darajada Chevron Masters Worth
2 Ayaa dalban kara Chevron Scholarship ee Nigeria?
3 Koorsooyinka U Qalma Chevron
4 Waa maxay CGPA aan u baahanahay si aan u codsado deeqda waxbarasho ee Chevron?
5 Goorma ayuu bilaabmayaa codsiga deeqda waxbarasho ee Chevron?
6 Chevron deeq waxbarasho ayaa looga baahan yahay dadka reer Nigeria
7 Sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee Chevron ee Nigeria
8 Talooyin ku saabsan sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Chevron
8.1 Codsigaaga ugu gudbi waqtiga loogu talagalay
8.2 U hogaansanaanta sharciyada hagida deeqda waxbarasho
8.3 Fahmaan heerarka ku lug leh oo si caddaalad ah u raac
8.4 Akhriso su'aalaha hore iskuna day inaad fahanto nooca su'aalahooda
8.5 Joogtee CGPA aad u wanaagsan
9 Gunaanad iyo talo soo jeedin
Immisa ayey mudan tahay deeqda waxbarasho ee Chevron?
Deeqda waxbarasho ee 'NNPC-Chevron' ayaa u qalma inta udhaxeysa 100,000 NGN ilaa 150,000 NGN waxay kuxirantahay qaybta. Qiimaha deeqda waxbarasho ee Chevron Masters maahan mid la mid ah Chevron shahaadada jaamacadeed.
Darajada Chevron Masters Worth
Deeqda waxbarasho ee Chevron ee ardayda masters-ka ah ayaa mudan 200,000 NGN inkasta oo ay ku kala duwan tahay hadba qaybta.
Ayaa dalban kara Chevron Scholarship ee Nigeria?
Deeqda waxbarasho ee Chevron waxaa laga filayaa inay lahaato aqoon gaar ah ka hor inta aysan dalban. Dadka dalban kara deeqdan waxbarasho waa:
Arday Nigerian ah ama caalami ah oo wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha dadweynaha ee laga aqoonsan yahay Nigeria.
A 200level Nigerian ah shahaadada koowaad ee deeqda waxbarasho. Chevron sidoo kale waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo heer jaamacadeed ah.
Deeqda waxbarasho kuma koobna ardayda injineernimada laakiin waxay ka imaaneysaa kulliyadda injineernimada waxay faa'iido u tahay ardayga. Ardayda caafimaadka sidoo kale waxay taagan yihiin fursad sare.
Ardaygu waa inuu haystaa CGPA qiimeynta fasalka labaad iyo wixii ka sareeya iyadoo kuxiran heerka cabirka jaamacadda ee waqtiga codsiga.
Ardayda dabeecad wanaagsan oo mudan sida madaxa waaxdu waxay leedahay door aad u muhiim ah oo ay ku leeyihiin talo soo jeedinta.
Koorsooyinka U Qalma Chevron
Hay'ada deeqda waxbarasho ee Chevron waxay sanad walba go'aan ka gaari kartaa inay ku darto koorsooyin cusub liiska barnaamijyada u-qalmitaanka si loo dalbado deeqda waxbarasho ama haddii kale, laakiin xilligan, hoosta waxaa ku yaal liiska koorsooyinka dalban kara deeqda waxbarasho ee Chevron ee Nigeria. Ardayda dhigata shahaadada koowaad ee waaxyadan waxay dalban karaan deeqda waxbarasho ee Chevron;
Maamulka Ganacsiga / Dhaqaalaha
Sayniska Kombiyuutarka / Injineernimada Kombiyuutarka / Injineeriyada Sayniska
Cilmiga Korontada / Elektiroonigga
Daraasaadka Deegaanka / Sahaminta
Cilmiga Geology / Geophysics
Isgaarsiinta Baaxadda / Saxafiga
Farsamada / Birta & Qalabka injineernimada
Daawada Aadanaha / Ilkaha / Farmashiyaha
Waa maxay CGPA aan u baahanahay si aan u codsado deeqda waxbarasho ee Chevron?
Deeqda waxbarasho ee Chevron waxaa aasaas u ah ardayda tacliin ahaan aad u wanaagsan oo ugu sarreysa fasalkooda.
Jaamacadaha qaar, fasalka labaad ee sare wuxuu ka yimaadaa CGPA-da 3.5 halka laga yaabo inuu si kale uga jiro iskuulada kale qaarkood; kiisaska badankood waxay kuxirantahay nidaamka qiimeynta jaamacadda / dugsiga laakiin si kastaba ha noqotee, deeqda waxbarasho ee Chevron waxay ubaahantahay codsadayaashu inay yeeshaan fasalka labaad ee CGPA iyo wixii ka sareeya. Wax kasta oo ka yar lama aqbali karo.
Goorma ayuu bilaabmayaa codsiga deeqda waxbarasho ee Chevron?
Deeqda waxbarasho ee Chevron waxay bilaabataa qiyaastii Maajo sannad kasta waxayna dhammaataa Sebtember.
Chevron deeq waxbarasho ayaa looga baahan yahay dadka reer Nigeria
Si aad ugu qalanto Chevron deeqda waxbarasho ee shahaadada koowaad ee Nigerian, waxaa jira shuruudo gaar ah oo ay tahay in la buuxiyo si ay u awoodaan inay ku dhammaystiraan arjiga si guul leh shuruudaha codsigana si sax ah ayaa loogu taxay;
Sawir baasaboor leh asal cad oo aan ka badnayn 3 bilood.
Kaarka aqoonsiga dugsiga
JAMB & Warqadda Ogolaanshaha Dugsiga
Natiijada heerka 'O'
Warqadda Aqoonsiga Gobalka
Qoraal natiijo ah ama qoraal qoraal ah oo si sax ah loo saxeexay lagana shaabadeeyey iskuulka oo sheegaya natiijooyinkii hore natiijooyinka CGPA si cad (Tan waxaa badanaa saxeexaya lataliyahaaga koorsada)
Dhawaan hay'adda deeqda waxbarasho ee Chevron waxay ku dartay Lambarka Aqoonsiga Qaranka iyada oo qayb ka ah shuruudaha codsigooda markaa waa inaad mid heshaa haddaadan haysan.
Sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee Chevron ee Nigeria
Kahor intaadan bilaabin codsigaaga, hubi inaad haysato dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah arjiga oo la buuxiyey oo si habboon loo marsiiyey.
Booqo bogga Chevron oo guji deeqaha waxbarasho oo si taxaddar leh u samee koonto ama si toos ah samee koonto iyada oo loo marayo Scholastica.
Tag sanduuqa emaylkaaga si aad u kiciso koontadaada
Ku qor macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, macluumaad dheeri ah, macluumaad waxbarasho, macluumaad kale oo loo baahan yahay sidoo kale ka dib soo geli dukumintiyadaada loo baahan yahay.
Soo rar sawirkaaga baasaboorka kaas oo ay tahay inuu noqdo meel cad oo cad.
Kafiiri arjigaaga si aad uga fogaato khaladaadka aan loo baahnayn, oo hubi inaad aragto dhammaan dukumiintiyada mar labaad ka dib markii aad dejiso. Magacaaga dukumiinti kasta waa inuu ahaadaa isku si iyo qaab isku mid ah laakiin haddii kale, waxaad u baahan kartaa inaad geliso nuqul ka mid ah dhaarta maxkamadda si loo xaqiijiyo.
Marka sanduuqyada loo baahan yahay oo dhan la buuxiyo, guji Gudbi Codsiga ka dibna sug iimaylka xaqiijinta si loo xaqiijiyo in dalabkaagu soo maray.
Talooyin ku saabsan sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Chevron
Haddii aad ka mid noqotid guddiga deeqda waxbarasho ee mid ka mid ah ururradan, waad fahmi doontaa sida ay muhiimka u tahay in la dalbado daryeel dheeri ah marka la soo gudbinayo arjiga.
Codsigaaga ugu gudbi waqtiga loogu talagalay
Markii hore ee aad gudbiso dalabkaaga, ayaa ka sii wanaagsan. Tani waa sababta oo ah ku soo gudbinta arjigaaga waqtiga loogu talagalay waxay kaa siinaysaa inaad ka adkaato dadka kale ee laga yaabo inay u soo diraan codsigooda hadhow.
Waxaa jira kumanaan arday oo wadanka oo dhan ah kuwaas oo aad ugu baahan isla deeqdan waxbarasho ee aad sidoo kale ubaahantahay. Marka sida kaliya ee looga hor mari karo arday kale oo isku fasal iskuulka ah sidaad adigu sameyso oo wali taagan isla jaaniskaaga ayaa ah inaad gudiga dib u eegis ku sameyso arjigaaga marka hore ka hor kooda.
U hogaansanaanta sharciyada hagida deeqda waxbarasho
Waxaa jira xeerar dejisan oo xukuma guddiga waana waajibaadka ardayga inuu raaco sharciyadan haddii isaga / iyada loo tixgelinayo baaritaanka.
U hogaansanaan la'aanta sharciyada waxay sababi kartaa in si deg deg ah looga mamnuuco ardayga guddiga baaritaanka. Dhammaan dukumiintiyada la soo gudbiyey inta lagu jiro codsiyada waxay ku xiran yihiin baaritaan buuxa iyo xaqiijin.
Fahmaan heerarka ku lug leh oo si caddaalad ah u raac
Deeq kasta oo waxbarasho oo laga helo Nigeria waxay raacdaa heerar iyo qawaaniin gaar ah waxaana ugu wanaagsan ardaygu inuu fahmo waxaas oo dhan oo uu si habboon u raaco.
Caadi ahaan, ka dib wicitaanada codsiyada, waxa soo socda ee sida caadiga ah soo baxa ayaa ah in ardaydu soo gudbiyaan codsiyadooda ka dibna ay sugaan liis garayn dheeraad ah iyo baaritaan, ka dib marxaladda wareysiga iyo imtixaanka ayaa soo socda.
Si looga gudbo marxaladdan, qofku wuxuu u baahan yahay inuu si taxaddar leh u diyaariyo oo uu u noqdo sayid su'aalaha su'aalaha wareysiga laga yaabo inay u baahdaan guddiga.
Haddii aad miisaamto marxaladda koowaad oo aad markaa kadib guul darreysato, markaa macno yar ayey yeelan lahayd ama macno ma leh haba yaraatee maxaa yeelay maheli doontid fursadda loo baahan yahay ee aad ugu gudubto tan xigta. Guddigu wuxuu wali ku hayaa ardayda ka gudubta marxaladda labaad illaa heer aad u dambeeya oo loo yaqaan heerka xaqiijinta.
Waxay tan u sameeyaan si loo hubiyo in dhammaan dukumiintiyada uu bixiyay ardaygu aan sinnaba loogu been abuurin sababo daneyste ah.
Akhriso su'aalaha hore iskuna day inaad fahanto nooca su'aalahooda
Tani waa hab wanaagsan oo la isku dayo in lagu arko sida ay su'aalahoodu u egyihiin oo ay ugu jiraan diyaarinta habboon ee waxa laga filayo.
Joogtee CGPA aad u wanaagsan
Haddii aad horeyba uheli jirtay deeqda waxbarasho ee Chevron ama qof damacsan, weli waxaad ubaahantahay CGPA wanaagsan oo safka kusii jira.
Haddii CGPA-gaagu ka hooseeyo ugu yaraan ka dib marka lagu siiyo deeqda waxbarasho ee chevron, deeqda waxbarasho waa lagala noqonayaa.
Waxaa jira fursado badan oo halkaa ka jira oo loogu talagalay dadka qarka u saaran inay iskuulka ka baxaan ama ay ka tanaasulaan riyadooda iyadoon loo eegin inay xiriir la leedahay waxbarashada jaamacadda iyo in kale. Mararka qaar, qof walba waa inuu sameeyaa si geesinimo leh u toogtaa tallaalkaas iyadoon loo eegin sida ay wax u ekaan karaan.
Si aad u dalbato deeqda waxbarasho ee NNPC-Chevron, waxaad u baahan tahay inaad koontada ardayga ee Scholastica.
Xitaa maaha kaliya Chevron ee bixisa dabeecaddan deeqda waxbarasho ee ardayda ku nool Nigeria, waxaa jira fursado kale oo deeq waxbarasho ah meel kasta oo laga helo ururo kale oo kala duwan iyo muwaadiniin macno leh. Qaad tallaabada aad ku heli karto kaalmadaas dhaqaale ee aad maanta u baahan tahay.
Sidoo kale hubi fursadaha soo socda;
Sida loo codsado loona guuleysto deeqda waxbarasho ee MTN
Nidaamyada Wax Barashada ee Internetka oo leh codsi bilaash ah
Jaamacadaha Caalamiga ah ee Bilaashka ah ee waxbarashada aan lahayn
Deeqda waxbarasho ee Chevron ee NigeriaDeeqda waxbarasho ee NNPC ee Nigeria
Previous Post:10 -ka ugu sarreeya Deeqaha waxbarasho ee New York ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:15 Koorsooyinka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Nigeria ee Ardayda